Biyomareenka iyo Joint
SitemapSii Ballaarinta caaga
Caaga Wire Naasaha
Caaga Wire Khatimidii
Wareeji On Wire isku xira
Biyuhu kulankooda Box
Zhejiang Yaonan Electric Co., Ltd. oo la asaasay 2017 iyadoo magaalada oo ka diiwaangashan 10 milyan oo Yuan (hore la odhan jiray warshad Yueqing Yaonan Electric, aasaasay sanadkii 1996). Shirkadda waxa uu ku yaalaa Electric Appliance Shiinaha ee Capital - Liushi, Yueqing, waa shirkad isdhexgalka warshadaha iyo ganacsiga, takhasusay waxyaabaha caag ah, qalabka korontada sare iyo mid hooseeya danab iyo alaabtii iyo wax soo saarka mitir.
Shirkadda inta badan soo saartaa: kulanka nylon, kulanka ahama, kaarka silig ciddiyaha Steel, qanjirka cable biyuhu, block terminal, circuit breaker, meter pointer, meter digital iyo meter tamarta iwm Products si ballaaran loo isticmaalo, iyo adeegyada: mashiinada, awood, qalabka korontada, isgaarsiinta, military, deked markab, metallurgy, kiimikada, nalal, gaadiidka tareennada iyo warshadaha kale. Products waa la dhoofiyo North America, South America, Bariga Dhexe, Afrika iyo koonfur bari Asia, sida in ka badan 90 dal iyo gobollada.
Shirkadda daboolaa aag of 1,7000 mitir oo laba jibbaaran, iyadoo in ka badan 500 oo shaqaale ah. gaadiid ku haboon, ayaa ku dhow inay Shanghai, Ningbo iyo dekedaha kale. Shirkadda ayaa soo saarka xoog leh iyo hal-abuur, waxa uu noqday xirfad, oo baaxad weyn iyo shirkadaha soo saarka dhexe mid ka mid ah waxyaabaha dhoofinta.
Shirkadda sii wadaan in ay soo bandhigto qalabka wax soo saarka sare iyo shaqaalaha farsamada iyo maamulka xirfadeed, si loo hubiyo in alaabta oo tayo sare leh iyo qancinta macaamiisha. Shirkadda ayaa helay ISO9001 shahaado nidaamka tayada iyo CCC, CMC, SGS, CE, KEMA, ROHS, CB iyo BV iyo shahaadooyinka kale oo gudaha iyo kuwa caalamiga ah.
Shirkadda dhaxlay Ujeedada adeegga ka mid ah "tayada marka hore, ku salaysan sharafta, macaamiisha kor ugu", waxey ayideen abuuro mustaqbal qurux badan macaamiisha cusub iyo kii hore gacanta kula gacanta.
SAGXADA 5aad, NANRUIGUOWANG DHISMAHA, SANTIAOQIAO, LIUSHI, YUEQING, Zhejiang, 325603 Shiinaha
hadda na soo wac: 0577-62697732